Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: maro no mahay miresaka vitsy no mahay miheno | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: maro no mahay miresaka vitsy no mahay miheno
Aza mampiresaka, izay ny fiteny matetika heno karazana fomba filazan’ny olona fa tsy sodokan’ny fandaharana mandrebireby izay mitarika resabe na voafitaky ny kabary fangaronam-bava ny tenany. Atao inona moa anefa ny fanetsiketsehan-dresaka raha toa tsy vonona akory hihaino ny valin-dresaka ireo olona manetsiketsika ny resaka, ny hevitra izay efa nomaniny ihany no manam-bidy. Varotra moa no ataon’ireo mpilatsaka ho fidina, ny tetika atolotr’izy ireo tsirairay no ezahany andresen-dahatra ny mpifidy. Izay no anton’ity fotoana dinganina ankehitriny, ho fandafosana ny entan’ny tena, samy mampiely sy mandoka ny hevitra nomaniny ary mifaninana andresy lahatra ny mponina. Tsy misy maharatsy an’izany. Toy ny eny amin’ny tsena rehetra, samy mamelatra ny entany arak’izay heveriny tsara indrindra ahafahana isarihana ny mpanjifa, samy mandoka ny azy.
Na samy manana ny maha izy azy ny tsirairay, toa mitovitovy daholo ireo tolotra. Iza moa no tsy hilaza ny fikasany hiady amin’ny tsy fisin’ny fandriampahalemana, iza no tsy hiseho ho vonton’alahelo nohon’ny fahitana ny fahorina mianjady amin’ny mponina ka tsy hilaza ny fahavononany hitondra fanafody hanamaivanana an’ity fahasahiranana mandifotra ity… Samy manadino avokoa anefa ny firesahana ny tena vontoatiny mikasika ny fanovana izay takin’ny rehetra. Inona moa no fonosin’izany fiovana izany, ary inona no fomba fanefitra ahafahana anatanteraka an’izany.
Mipetraka arak’izany ny fanontaniana : inona no manjaka ? Tsy tokony hampisalasala ny famalina an’izany, ny TSY RARINY no manjaka ! Manjakazaka avokoa izay afaka manao an’izany, na nohon’ny fananany fahefana na nohon’ny herin’ny fananany, na nohon’ny fahaizany mitsikombakomba sy ny fahalalany làlam-poza… Mitampin-tsofina sady mitampim-bava avokoa ny ankamaron’ny mpilatsaka, samy mifehy tena tsy hikitikitika ny momban’izay, lasa mamato-tena mialoha ihany nefa any anaty ihany ny fanirina fahefana anisan’ireo iray antony nanitikitika naniraka tamin’ny fanapahan-kevitra ilatsaka amin’ity fifidianana ity.
Tazano kely anie ny fihetsiky ny tsirairay. Ao amin’ny foibe fiadidina ny fampielezan-kevitry ny tsirairay, ilay mpilatsaka efa indraindraina osorona ny anarana « filoha », ny mpanohana azy sy ny mpitolona manodidina efa manomboka maka loko-na tandapa sy fihetsaka tompo-menakely. Anjaran’ny mpifidy no mandinika, manan-danja ny safidin’ny tsirairay : aiza ny sasany amin’izy ireny raha ranomasina, rano-potaka aza efa manonja.